Warshadda Fanka ee Centrifugal | Soo-saareyaasha Taageerayaasha Centrifugal ee Shiinaha Suunka, oo alaab-qeybiyeyaasha ah
DF taxane hawo -mareenka centrifugal
Dabeecadda wax -soo -saarka 1. Sharaxaadda qaabka hawo -mareenka: 2. Baabuur wadista iyo rakibidda hawo -mareenka sida shaxda ayaa muujinaysa: 3.Hawo -mareenku waa inuu ka shaqeeyaa jawiga gaaska, kaas oo hawadu aanay ku jirin qaddar badan oo gaas caustic ah; kuma jirto gaaskii aashitada ahaa, gaaskii alkalinity, iyo gaaskii ololi jiray; arrinta walxaha boodhka ahi kama weyna wax ka yar 150mg/m3. 4.Sheeggu wuxuu ka samaysan yahay taargooyin bir ah oo tayo leh, ka dibna jaakad buufiyo electrostatic Sidoo kale waa ...
DT-E Taxanaha Ventilator Centrifugal
Faahfaahinta qaabka hawo-mareenka: 2.Heestaha taxanaha ah ee DT waa, wadidduna waa gudbinta V-suunka. Heerarka tayada sare leh ee caadiga ah ayaa loo adeegsadaa badeecada, waxay kor u qaadaa waqtiga socda ee aan burburin. Sidoo kale, V-suunka waa nooc ka mid ah suunka V-suunka, giraangiraha koorta ee suunka waxaa lagu hagaajiyaa koorta oo fidisa qaab dhismeed adag; hagaajinta iyo rakibidda ayaa aad ugu habboon. 3. Hawo-mareenku wuxuu la taagan yahay saldhigyada dhinac walba leh iyo jirku wuxuu u taagan yahay soo-dejin, waxaa loo qaybin karaa DT si ...
KF taxane hawo -mareenka centrifugal
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo-mareenka: 2. Baabuurka wadista iyo rakibidda hawo-mareenka sida shaxda ayaa muujinaysa ： 3.Baarku wuxuu ka samaysan yahay taargooyin bir ah oo tayo leh, ka dibna jaakad buufinta electrostatic ah. Kulanka ugu dambeeya waxaa lagu sameeyaa xariiqda kulanka. Faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa soo saaray farsamooyin horumarsan, sida alxanka alxanka, gunta hoose, rixinta TOX iyo iwm. Waxay hawada ka dhigaan inay qarxaan ...
Taxanaha LTB Hore-qalooca Blade Laba-soo-geliyaha Suunka Centrifugal Fan-kaxeeya
Taxanaha LTB wuxuu soo hormariyaa suunka hawo -mareenka hawo -mareenka oo wadata marawaxadda centrifugal waxay korsataa hor -u -mariyaha hore ee suunka lagu wado. Baabuurku wuxuu ku yaal meel ka baxsan cidhib -tirka wuxuuna kaxeeyaa dab -damiyaha si uu ugu wareego jidka suunka la wado.
Taxanaha LTBH Dib-u-leexday Ballad Laba-gashan Suunka Centrifugal Fan ku kaxeeyo
Taxanaha LTBH gadaal gadaal suunka hawo -mareenka hawada kaxeeya oo taageere u ah centrifugal wuxuu qaataa gadaal gadaal leh oo suunka la wado. Baabuurku wuxuu ku yaal meel ka baxsan cidhib -tirka wuxuuna kaxeeyaa dab -damiyaha si uu ugu wareego jidka suunka la wado. Saamiga gudbinta habboon wuxuu ka dhigi karaa barta shaqada ee lagu qiimeeyo taageere inay si fiican u dhigto xaaladda shaqada ee loo baahan yahay, wanaajin karto hufnaanta guud ee cutubka, oo ay gaari karto ujeeddada keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
Taxanaha LTBM Ballaca Hore-qalooca Laba-Volute Suunka Centrifugal Fan ku kaxeeya
Taxanaha LTBM laba jibbaar ee mugga hore ee suunka darawalka centrifugal wuxuu ka kooban yahay koronto isku xiran iyo dab -damis oo ah laba qaybood oo ah taageereyaasha xarriiqda laba jibaaran, oo leh hal mooto oo loo isticmaalo in lagu kaxeeyo laba qaybood oo soo -dejiyayaal ah iyada oo la marinayo suunka. Qaab dhismeedku wuxuu si weyn u yareeyaa mugga mashiinka oo dhan wuxuuna ka heli karaa mugga hawo -weyne meel bannaan oo rakibitaan yar ah.